eNasha.com - सरोज प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर
सरोज प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर
सफलता धेरैको भाग्यमा हुँदैन । तर पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिने कम गायकमध्ये एक पर्छन्- सरोज दत्त । विगत १२ वर्षदेखि नेपाली पपगायनमा अविचलित रुपमा निरन्तर लागिरहेका गायक दत्तलाई पहिलो पटक चीसो पानीमा गीति एल्बमले चिनाएको थियो । उनको यो एल्बमको शीर्षक गीत चिसो पानीमा माया चिसो पानीमा...लाई उनी जुन ऊर्जाका साथ गाएका थिए, त्यो ऊर्जाले नै उनलाई अन्जान र संघर्षशील गायकबाट एकै पटकमा कर्मशील गायकका रुपमा स्थापित गरायो । तर पनि उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले गुनासो गर्छन्, सरोजको क्षमता अनुसार उसको प्रतिभाको कहिल्यै कदर भएन । उनीभन्दा कम क्षमतावान् गायकहरु हेर्दाहेर्दै स्टार भए, तर उनी दिनदिनै सङ्गीतको रङ्गीन पर्दाबाट हराउन थालेको गुनासो नजिकका साथीभाइको छ ।
धेरैले तपाइँलाई क्षमतावान् गायक भन्छन्, तर पनि पछि पर्नु भयो भनेर गुनासो गर्छन्, के भन्नुहुन्छ ?
मलाई व्यक्तिगत रुपमा भेटेरै भन्ने साथीहरु पनि थुप्रै छन् । मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ, मेरो जति क्षमता छ, त्यति हिट हुन सकिनँ । तर पनि म असन्तुष्ट चाहिँ छैन । शायद मैले गर्ने काम, मेरो र्समर्पण र इमान्दारिता कहीँ कतै कमी होला !
बच्चामा गायक हुन्छु भन्ने लागेको थियो ?
गायकै हुन्छु भनेर त बच्चामा कसले सोच्छ र !
तपाइँलाई घरमा कोही पाहुना आउँदा पनि गाएर सुना त भन्नुहुन्थ्यो रे नि ?
अँ, त्यो चाहिँ साँचो हो । घरमा समारोह वा भेला हुँदा आमाले मलाई पाहुनाको अघिल्तिर गाएर देखा भन्नुहुन्थ्यो, अनि म पनि के कम र ! गाउन शुरु गरिहाल्थेँ ।
गाउने सनक चाहिँ रेडक्रसले आयोजना गर्ने स्कूलस्तरीय कार्यक्रमको सफलताले गर्दा नै आएको भन्छन् नि ?
अँ स्कूलमा बेलाबेलामा विभिन्न कार्यक्रम हुन्थे । त्यसमा गाउने जिम्मा मेरो हातमा पथ्र्यो । गाउँथेँ र पुरस्कार पनि हात पारिहाल्थेँ । सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालय विराटनगरको म राम्रै विद्यार्थी थिएँ ।
तपाइँ स्कूलताका कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो ? पढ्न मन गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ?
म एउटा राम्रो, अनुशासित विद्यार्थी थिएँ ।
जब तपाइँ क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ आउनु भयो, सोचाई सङ्गीतमै केही गर्छु भन्ने थियो कि पढाईमा मात्र ध्यान दिन्छु भन्ने थियो ?
सङ्गीतमा रुचि त थियो, तर यसैमा लाग्छुजस्तो चैँ लागेको थिएन । तर सङ्गीतले तानिहाल्यो ।
पछि तपाइँले सुनील बर्देवा र महेश्वर राजभण्डारीसित मिलेर साङ्गीतिक ब्याण्ड बनाउनु भयो, म्याटि्रक्स । कसरी जोडी मिल्यो ?
म त्यतिबेला मेरी फुपुको घरमा बसेर क्याम्पस पढिरहेको थिएँ । नजिकै सुनील र महेश्वर बस्थे । बेलाबेलामा हाम्रो भेट हुन्थ्यो र त्यहीँ ब्याण्ड बनाउने सोच शुरु भयो । हामीले शुरुताका अंग्रेजी गीत गाउँथ्यौँ । ती गीतले नै हाम्रो ध्यान खिँच्यो र पछि क्याम्पसका विभिन्न स्वागत कार्यक्रममा हामीलाई निम्तो आउन थालेपछि हामी लोकल्ली हिट भयौँ ।
कुन बेला लाग्यो, अब मैले गाउनु पर्छ, एल्बम निकाल्नु पर्छ भनेर ?
हामीले यसरी गाउँदै जाँदा सजनस्मृति पप प्रतिस्पर्धामा प्रथम भएर पुरस्कार पनि जित्यौँ । यो पुरस्कार जितेपछि हामीले एल्बम निकालेका हौँ ।
तर एउटा एल्बम निकालिसकेपछि तपाइँको जोडी टुट्यो किन ?
सबै व्यस्त भयौँ । कोही अमेरिका, कोही काम गर्ने धूनमा अनि कसैको के मजबुरी ! यस्तो भएपछि हामीले अलग-अलग भएर काम गर्ने विचार गर्‍यौँ ।
एकल एल्बम निकाल्नु हुँदा हिट होइएला, नाम कमाइएला भन्ने सोच्नु भएको थियो ?
रुचि भएकाले आफ्नो सिर्जना त हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । तर हिट होइएला, नाम कमाइएला भनेर सोचेका थिइनँ । तर पहिलो एकल एल्बमले नै मलाई थोरबहुतले चिन्न थाले ।
तर हिजोआज हरेक दिन नयाँ गायक जन्मिरहेका छन्, लोकप्रियता पनि तपाइँले चाहेजस्तो पाउनु भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तपाइँलाई कहिल्यै नयाँ पुस्ताका गायकसँग असुरक्षित महसूस हुँदैन ?
हुँदैन, बरु खुशी लाग्छ । अहिले सोच्दा यस्तो लाग्छ कि कसरी यत्तिका १२ वर्षबितेछन् ! नयाँ गायकहरुको युवा जोश देख्दा मलाई पनि जोश आउँछ र म उत्तिकै जोशिएर गाइरहेको हुन्छु ।
नेपाली गायनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
जबसम्म नेपाली भाषा रहन्छ, यसमा लाग्ने सङ्गीतकर्मीहरुको भविष्य उत्तिकै सुरक्षित हुन्छ । राम्रो भविष्य देख्छु म । किनभने हिजो मै अंग्रेजीमा गीत गाउँथेँ, तर आज म नेपालीमा गाउँछु । नेपालमा बस्नु हुन्छ र नेपाली हो भने तपाइँले नेपालीमा नगाई धरै छैन !